Fiarovana ny tontolo iainana: miady amin’ny fako plastika ny orinasa Ambatovy | NewsMada
Fiarovana ny tontolo iainana: miady amin’ny fako plastika ny orinasa Ambatovy
Nanao fampirantiana tao anatin’ny toeram-pitrandrahany ao Moramanga ny orinasa Ambatovy, herinandro vitsy lasa izay. Hizarana amin’ireo mpiasan’ny sampandraharaha rehetra mandrafitra an’Ambatovy, ireo ezaka ataon’ny orinasa ho fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana ao anatin’ny faritra misy azy. Mpiasa manodidina ny 1.108 no nandray anjara tamin’izany, tafiditra amin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana, nafantoka amin’ny lohahevitra « Ady amin’ny fako plastika ».
Nisongadina nandritra izany ny fampirantiana ireo asa maro samihafa ataon’Ambatovy ho fiarovana ny tontolo iainana. Efa hatry ny ela nanana sampana miandraikitra ny fitantanana ny fako ny ao Ambatovy, isan’izany ny fako plastika. Manaraka ny fomba fiasa mampihena ny fako, mamerina mampiasa izany raha azo atao, manodina ary manome lanja indray ireo fako.
Manofana ireo mpiantoka ho fanajana ny zon’ny ankizy
Mpiasa 6.500 mahery avy amin’ny orinasa 70 mpiantoka asa ho an’Ambatovy omena fiofanana momba ny fanajana ny zon’ny ankizy, nanomboka ny 26 jolay teo hatramin’ny novambra 2018. Any Moramanga sy Toamasina ny fampiofanana, mifantoka amin’ireo fotokevi-dehibe 10 momba ny zon’ny ankizy sy ny orinasa, ampiharin’Ambatovy hanamafisana ny andraikitra efa noraisiny amin’ny fanajana ny zon’ny ankizy.
Mifototra amin’ny fifanekena samihafa nosoniavin’ny firenena maro ireo fotokevi-dehibe 10 ireo. Tanjona ny fiarovana ny ankizy amin’ireo asa ataon’ny orinasa, handraisana anjara amin’ny fanafoanana na fampihenana ny tsy fanajana ny zony, toy ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Mpiasa 100 mahery avy amin’ireo orinasa mpiantoka asa aloha no manaraka ny fiofanana ho mpanofana. Izy ireo indray avy eo no hampita ny fahaizana norantoviny amin’ireo mpiara-miasa rehetra ao amin’ny orinasa misy azy.